‘यद्यपि मैले सुनेको सत्य नहुन पनि सक्छ । यसलाई कलाकै रूपमा मात्र बुझ्दा पनि फरक पर्दैन,’ दीक्षितले भने । कलाकार दीक्षित भने हरेक चित्रमार्फत सन्देश नै दिनुपर्छ भन्ने ठान्दैनन् । ‘हरेक कलाकारले सन्देश दिन काम गर्छन् भन्ने हुँदैन । मैले चित्र बनाउँदा आनन्द प्राप्त गर्छु, ऊर्जा प्राप्त गर्छु,’ उनी भन्छन्, ‘कला आफैंमा अभिव्यक्ति हो ।’
यसबाट अन्य उपाधिको भन्दा मिस नेपाल वर्ल्डको महत्त्व बढी छ भन्न सकिन्छ । आम बुझाइ पनि त्यही छ । तर यी पाँच ताजधारी त्यसलाई स्विकार्दैनन् । भन्छन्, ‘त्यो पहिले मिस नेपाल, फर्स्ट रनरअफ, सेकेन्ड रनरअफ हुनेजस्तो होइन नि ।’ कुराकानीको सुरुमा ‘तपाईं किन मिस नेपालमा आउनुभएको ?’ प्रश्नमा अनुष्काले भनिन्, ‘हुन त केही गर्न मिस नेपालमै आउनुपर्छ भन्ने होइन, तर मिस नेपालको ताज पहिरिएपछि पहिचान बन्छ, एक्स्पोजर पाइन्छ ।’ उनको विचारमा बाँकी चारै जना सहमत भए । तर, सपना भने सबैका आ–आफ्नै छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रमुख बन्ने महत्त्वाकांक्षी सपना बोकेकी प्रदीप्ताले तत्काल भने सौन्दर्य प्रतियोगितामा अन्तर्राष्ट्रिय ताज पहिरिने सपना पूरा गर्न प्रयास गर्ने बताइन् । मिस इन्टरनेसनल मीरालाई बोल्न मन पर्छ । थुफ्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने त्रममा नेपालका धेरै ठाउँमा पुगेकी छन् । तर, उनको सोच भने विद्यालयमा ‘माइन्डफुलनेस’ को शिक्षा कसरी दिने ? मानिसलाई कसरी खुसी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छ ।
कान्तिपुरसँग झन्डै एक घण्टा गफिएका ताजधारी सुन्दरीले आफू सफल भएलगत्तै परिवार, आफन्त र सहयोगीको स्मरण गरे । ‘अरू कोही विशेष मान्छे पनि थिए कि ?’ भन्ने प्रश्नको सोधियो । मीराले प्रश्नको आशय नबुझेर केहीबेर अलमलिइन् । अनुष्काले विशेष व्यक्ति भएको स्विकारिन् । अन्यले त्यस्तो कोही नभएको जवाफ दिए । मिस नेपालपछि कलाकारिता क्षेत्रमा लागेको देख्न पाइन्छ । नायिका बन्ने या कला क्षेत्रमा लाग्ने रुचि छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नमा रोजले आफू सेलिब्रेटी बन्न मिस नेपालमा नआएको भन्दै तत्काललाई कुनै सम्भावना नरहेको बताइन् । रियाले आफूलाई अभिनय गर्न नआउने भन्दै त्यसबाट उम्कने प्रयास गरिन् ।